Pabrikanina CNC fikosoham-bary ary vy mpamatsy | Ouzhan
Stainless vy CNC fikosoham-bolo vy fikosoham-bary faritra
Ny vy tsy misy fangarony koa dia misy singa toa ny Ni, Ti, Mn, N, Nb, Mo, Si, ary Cu. Ny vy tsy misy fangarony dia manana toetra tena tsara toy ny tanjaka tsy manam-paharoa, ny fanoherana ambony, ny fanoherana ny harafesina ary ny fanoherana ny harafesina. Noho izany, dia be mpampiasa amin'ny indostria, milina sakafo, indostrian'ny electromekanika, indostrian'ny fitaovana ao an-trano sy ny haingon-trano, ny indostrian'ny famaranana. Ny fangatahana sy ny firoboroboan'ny vatan'ny vy vy dia hihalalaka sy malalaka kokoa, fa ny fampiharana sy ny fampandrosoana ny vy tsy misy fangarony dia voafaritry ny ambaratongam-pivoaran'ny teknolojia fitsaboana azy io.
Tombontsoa amin'ny vy vita amin'ny vy vy Ouzhan
- Toetran'ny simika: ny fanoherana simika sy ny fanoherana ny harafesin'ny electrochemical no tsara indrindra amin'ny akora vy, faharoa amin'ny alitara titanium.
- Toetra mekanika: arakaraka ny karazany vy tsy misy fangarony, tsy mitovy ny toetra mekanika. Ny vy vy martensitika dia manana tanjaka sy hasiam-batana avo lenta, ary mety amin'ny famokarana faritra tsy mahazaka harafesina izay mitaky tanjaka avo sy fanoherana mitafy ambony, toy ny porofom-pirinty turbine sy vy vy. Antsy, vy tsy misy fangarony, sns., Ny vy vy austenitika dia manana plastika tsara, tsy matanjaka fa ny fanoherana ny harafesina tsara indrindra eo amin'ireo vy vy. Izy io dia mety amin'ny fotoana izay mitaky fanoherana ny harafesina fa ambany ny toetra mekanika, toy ny zavamaniry simika sy zavamaniry zezika. Ireo fitaovan'ny mpanamboatra asidra solifara sy mpamokatra asidra hydrochloric sns, mazava ho azy, dia azo ampiasaina amin'ny indostrian'ny tafika toy ny sambo mpisitrika. Ny vy vy tsy misy fangarony dia manana toetra mekanika antonony sy tanjaka ambany, saingy mahatohitra ny fitrandrahana azy ary mety amin'ny faritra lafaoro indostrialy isan-karazany.
- Fampisehoana dingana: ny vy austenitika dia manana ny fahombiazan'ny dingana tsara indrindra. Noho ny plastika tsara dia azo zahana amin'ny takelaka maro, fantsona ary profil hafa, izay mety amin'ny fikarakarana tsindry. Ny vy vy martensitika dia manana fahombiazan'ny fizotran'ny asa noho ny hamafiny.
OEM namboarina vy fikosoham-bary vy fikosoham-orinasa Shanghai Shanghai vy vy fikosoham-bikan'ny mpanamboatra
Ouzhan dia mpamokatra manambatra indostria sy varotra, manome serivisy fanodinana milina tokana sy milina fanodinana. Araka ny fitakian'ny mpanjifa dia afaka manodina vy tsy misy fangarony izy io miaraka amin'ny faritra matevina miorina tsara sy azo itokisana. Ireo faritra masinina ireo dia amboarina amin'ny alàlan'ny akora faran'izay tsara kalitao, izay azo avy amin'ireo mpamatsy ampahany marim-pototra fanta-daza eny an-tsena. Ny ekipa teknika matanjaka sy matihanina ary ny rafitra fitantanana sy ny fiasan-tsika mahomby dia afaka miantoka ny famokarana tonga lafatra ny milina vy fikosoham-bary. Ankoatr'izay, ny vokatra vy vita amin'ny vy vita amin'ny vy natokana ho an'ny CNC dia mifanaraka tsara amin'ny fenitra kalitao ary azo ampiasaina amin'ny fampiharana indostrialy isan-karazany. Ary afaka manome serivisy vidin'ny fifaninanana amin'ny vokatra vy fikosoham-bary izahay amin'ny mpanjifa sarobidy.
Inona avy no ilana ny vy vy vy
1. Ny faritra austenitika vita amin'ny vy tsy misy fangarony dia manana fahombiazana feno sy feno, ary be mpampiasa amin'ny sakafo, fitaovana simika ankapobeny, ary angovo atomika;
2. Ferritic vy vy milled faritra, be mpampiasa amin'ny pitting-mahatohitra fitaovana;
3. Ny ampahany vita amin'ny vy vy martensitika, be mpampiasa amin'ny fitaovana mahatohitra asidra solifara, asidra phosorika, asidra formika ary asidra acetic;
4.Ny faritra fikosoham-bary vy Chromium-nickel-molybdenum, be mpampiasa amin'ny fanadiovan-tsolika, zezika, taratasy, solika, indostria simika ary orinasa hafa hamokarana hafanana sy mpanondrana.
- Ny vokatra vita amin'ny vy tsy misy fangarony CNC rehetra dia azo zahana amin'ny fizahana kalitao henjana.
- Araka ny sary na ny santionany amin'ny fanamboarana ny faritra fikosoham-bary vy.
- Ouzhan dia manana milina fanodinana, serivisy fampidirana, tsipika famokarana mahazatra ary miaraka amin'ny fanamarinana ara-materialy sy ny tatitra momba ny fitsapana ny vokatra.
Previous: Varavarana firavaka alimina alim-baravarana sy fikarakarana varavarankely
Manaraka: Namboarina manokana faritra fikosoham-bary fikosoham-bary